असामाजिक तत्त्वविरुद्ध लड्नु चुनौतीपूर्ण छ । लड्ने साहस गर्दा प्रहरी कर्मचारी प्रताडित हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । अपराध मनोवृत्ति र आपराधिक कार्यविरुद्ध लड्न उच्च मनोबल चाहिन्छ, जुन नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी खट्किएको छ । उच्च मनोबल भएका कर्मठ एवं इमानदार प्रहरीको खडेरी पर्दै गएको भान हुन्छ । ठूला आपराधिक तत्त्वहरू विरुद्ध लड्ने जोखिमपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी वृत्तमा हिचकिचाहट छ । अपराधीहरू शिर ठाडो गरेर हिँड्ने र प्रहरीचाहिँ शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? गम्भीरताका साथ शोध गर्ने कसले ? देश हाँक्ने, प्रहरी संगठन हाँक्ने, प्रशासन संयन्त्र हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व वा उच्च पदाधिकारीले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
लेखक नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हुन् ।